Midzi yeUtsinye: Kuuya Munguva pfupi kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Midzi yeUpengo mutambo unotyisa wevhidhiyo kubva kuCrania Mitambo iyo ichavhurwa paStam, iyo Valve chitoro chinotipa mufaro wakanyanya maererano nenyika yekutamba paLinux. Zvakanaka, ikozvino tinoziva kuti mutambo uchakurumidza kuuya kuLinux kuti iwe ugone kuanakidzwa pane yako aunofarira distro kana Steam Machine michina. Mutambo wese unofamba nekutenda kune inoshamisa Unreal Injini 4 giraidhi injini inofamba ichienda kumazita makuru sekuziva kwaunoita iwe.
Mumutambo wevhidhiyo mamwe magiraidhi akanaka akaverengerwa nezviitiko zvinosiririsa zvinowanzoitwa zita rinotyisa senge iri uye mauri kutora chinzvimbo Riley McClein. Izvo ndezve chiremba ane pfari uyo uyo pasi pehusiku hwekuchinja kwake anowana chimwe chinhu kubva pane zvakajairwa, nekuti iye anowana chipatara kwaanoshanda mumhirizhonga yakazara uye pamwe pane zvinokanganisa kubata kwekusiri kwechokwadi. Dr. Riley anofanirwa kuongorora nekutsvaga kwakatangira zvinotyisa zvinotambudza chipatara, kuponesa varwere vake uye pamwe kupona husiku hwakasviba ...
Kunyangwe ichiwanikwa kune mamwe mapuratifomu, rutsigiro rweLinux rwuri kuuya nekukurumidza kune uyu wekutanga-munhu anotyisa zita. Dedes Crania, vavaki vayo, Ivo vakati ivo vanoda kusunungura mutambo zvakare wepuratifomu yedu mushure memwedzi kana miviri yekuburitswa kwemamwe mapuratifomu. Munguva iyoyo ivo vanogadzirisa zvese zvinogumbuka uye matambudziko anogona kuitika kune izvo zvatova paStam, painowanikwa kune mamwe masisitimu e € 9,99, iyo yandinofungidzira kuti ndiwo uchave mutengo wezita reLinux futi.
Kana iri injini yemagetsi ine simba, Shamisa Engine 4, Yakagadzirwa neEpic Mitambo, uye inowanikwa kune akawanda mapuratifomu, ichibvumira inofamba mifananidzo yemutambo Unreal Tournament, iye anozivikanwa wekutanga-munhu shooter. Yechina vhezheni ndeyekupedzisira iyo yakavhurwa panguva ino uye yepamberi uye inoshamisa. Muchokwadi, yave iri iyo inoshandiswa nemitambo senge maGiya ehondo, Street Fighter V, uye yakareba etc. kune akawanda Android, Windows, Linux, MacOS, Oculus, iOS, HTC Vive, Xbox, PlayStation mazita, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Midzi yeUtsinye: Kuuya Munguva pfupi kuLinux